Tavoahangy Plastika Nariana Nasiana Zavamaniry Mamelana Natao Sakana Ao Amin’ny Garan-dalamby Indiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2017 13:22 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Nederlands, 日本語, Español, عربي, Aymara, English
Pikantsary avy amin'ny lahatsary fanadihadiana Ny Tsara Indrindra Ao India , hita ao amin'ny YouTube.
Tamin'ny taona 2002, nandrara ny fampiasana ny harona plastika i India mba hiarovana ny tontolo iainana sy mba hampisosa tsara ny ao an-tatatra. Efa dingana lehibe izany na dia mbola mijanona ho olana aza ny fampiharana azy. Na izany aza, rehefa miresaka harona plastika, tsy asiana resaka mihitsy ireo plastika maro hafa izay mandrahona koa toy ny tavoahangy sy fonosana nariana .
Ao Kochi, India, namorona zavatra momba izany ny sefon'ny garan-dalamby sy ny ekipany – namadika ny tavoahangy plastika narian'ny mpandeha teny amin'ny lalamby ho lasa fitoeran-javamaniry .
RT RailMinIndia “RT AnilMatt00: Fanavaozana lehibe nataon'i RailMinIndia tao amin'ny garan-dalamby Aluva ao kerala – tavoahangy nariana.
Matetika ariana eny amin'ny toerana malalaka sy ny tokotanim-bahoaka manerana an'i India ireo tavoahangy plastika, kaopy plastika fanary , plastikan-drano efa foana sy ny fonosana plastika manify. Araka ny Foibe Fanaraha-mason'ny Fahalotoan'ny Tontolo Iainana , 40% (6137 taonina) amin'ny fitambaran'ny fako plastika (9205 taonina) isan'andro no tsy misy mpaka sy miparitaka ao an-drenivohitra Indiana fotsiny. Mahatratra hatramin'ny 5.6 tapitrisa taonina isan-taona ny fako plastika ao amin'ny firenena. Ary mitaky ezaka be dia be ny fanovana izany avy amin'ny faritra rehetra .
Nanome ohatra tamin'ny fomba afaka ataon'ny olona momba ny olana ny garan–dalamby Aluva ao Kochi.
Araka ny lahatsary etsy ambony, nampiasa ilay hevitra i C Balakrishnan lehiben'ny gara sy ny ekipany Atoa Mohan sy Rtoa Indu. Tsy natao haingo fotsiny ireo tavoahangy ireo. Fa miasa tahaka ny sakana hanakanana ireo olona mba tsy hanivaka eny amin'ny lalamby ihany koa. Nanoratra tao amin'ny Facebook i Neha Venkatesh:
Nanaitra ahy ny fiantraikany lehibe indrindra tamin'ity fandraisana andraikitra tsotra kely ity : matetika ny olona no miampita ny lalamby ary izany no mitarika ny fitomboan'ny loza mahatsiravina eny amin'ny lalamby ; tsy manome lalana malalaka ho an'ny olona hiampitana eo ireo zavamaniry ireo, ary mandrisika azy ireo mba hampiasa ny tetezana fandehanan-tongotra rehefa hiampita mankany amin'ny toerana hafa.
Angamba handrisika fanavaozana amin'ny fomba hafa vaovao ity famoronana avy amin'ny fanodinana ity mba hiatrehana ny fitomboan'ny fako plastika ao India .